Sebenzisa iMacX DVD Superhero Day bese uzuza imiklomelo emnandi | Izindaba ze-IPhone
Sebenzisa iMacX DVD Superhero Day bese uzuza imiklomelo emnandi
U-Ignacio Sala | 27/04/2021 11:00 | Izaziso
Abafana abavela eMacXDVD gubha umcimbi, uSuperhero Day, umcimbi lapho Raffle a Samsung OLED TV with 4K resolution, 10 Marvel and DC figures, 30 DVD DVD wamaqhawe amakhulu nokunikeza amakhophi angama-500 ansukuzonke wesoftware ye-DVD MacX DVD Ripper.
IMacX DVD Ripper ingenye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu, uma kungenjalo ezingcono kakhulu, ze yenza amakhophi wesipele ama-DVD akho. Uma ubulokhu ufuna isicelo sokwenza ikhophi eyisipele yelabhulali yakho yevidiyo isikhathi eside, ayikwenzi ukuthi uhlale ubheka, ngeMacX DVD Ripper ungayenza ngokushesha futhi kalula.
1 Ungayifaka kanjani i-raffle
2 Yini iMacX DVD Ripper
3 Yini esingayenza nge-MacX DVD Ripper
3.1 Izipele ngaphandle kokulahleka kwekhwalithi
3.2 Dala amakhophi aphelele e-DVD ngokwakha izithombe ze-ISO
3.3 Esheshayo emakethe
3.4 Iyahambisana nanoma iyiphi i-DVD
3.5 Guqula ama-DVD akho abe yifomethi
3.6 Kusuka ku-DVD kuye ku-MP4, H.265 / HEVC, MOV ...
3.7 Hlela amafayela aguquliwe
4 Ungayigcina kanjani i-DVD nge-MacX DVD Ripper
5 Thola ikhophi yamahhala yeMacX DVD Ripper
Ungayifaka kanjani i-raffle
Bamba iqhaza ku-raffle enikezwa abafana abavela kwi-Mac DVD Ripper, kufanele sivakashele i- iwebhusayithi yomcimbi, ukwakha iqembu lethu iqhawe, iqembu elizolwa neqembu labaphathi futhi lifake ikheli lethu le-imeyili ukufaka i-raffle ngokubamba iqhaza.
Uma sifuna ukunweba inani lamathuba okuthi sithinte omunye wemikhiqizo eguqulwayo, singa:
Thola amasheya ayi-10 ngokulanda iMacX DVD Ripper.
Abanye abangu-5 uma sabelana ngale phromoshini nabanye abangane,
Okunye okungu-3 uma sibheka umhlahlandlela wokuthi ungayikopisha kanjani i-DVD movie nokunye okufakiwe uma sijoyina i-akhawunti yakho ye-Facebook.
Uma sithola wonke amasheya angeziwe, abafana baseMacX DVD Ripper basinika amanye amasheya angama-20, ngakho-ke sizoba namathuba amaningi wokuthola esinye salezi zipho ezinhle kakhulu.
Yini iMacX DVD Ripper
Njengoba ngishilo ngenhla, iMacX DVD Ripper uhlelo lokusebenza esingakwazi ngalo yenza isipele kulabhulali yethu yevidiyo, umtapo wolwazi wamavidiyo okungenzeka uthathe iminyaka eminingi ukuwudala, ikakhulukazi uma ungumthandi weqiniso wama-movie.
Kepha ngaphezu kwalokho, kuhle futhi ukukwenza amakhophi edijithali ama-DVD omndeni (imishado, izinsuku zokuzalwa, imicimbi ekhethekile ...) okungenzeki ukuthola amakhophi ayo ngoba ngamavidiyo amadala.
Ukuba nekhophi ngefomethi yedijithali kuyindlela engcono kakhulu yokwenza nakanjani ungalahli lokhu okuqukethwe yaziswa futhi yazwakala kubantu abaningi. Nge-Mac X DVD Ripper, inqubo yokwenza isipele ingumoya.
Yini esingayenza nge-MacX DVD Ripper
Izipele ngaphandle kokulahleka kwekhwalithi
Uma kukhulunywa ngokudala amakhophi wesipele ama-DVD ethu, iningi labasebenzisi abenza lokho abayethembi ikhwalithi abangazithola ngezicelo ezahlukahlukene ezisinikeza lo msebenzi ofanayo kepha lokho, nokho, ekugcineni akuhlangabezani nokulindelwe.
IMacX DVD Ripper iyasivumela wenze amakhophi ngqo ama-DVD ethu, ngekhwalithi efanayo esiyithola ngefomethi ebonakalayo. Uma ungakukholwa impela, kufanele nje ulande uhlelo lokusebenza mahhala futhi wenze isivivinyo ngaphandle kokuchitha i-euro eyodwa.
Izipele, kufaka phakathi umsindo ngefomethi yeDolby AC3 / DTS 5.1, Zenziwe ngefomethi ye-MPEG2, ifomethi esingayikhiqiza kamuva ngohlelo lokusebenza lwe-VLC yamahhala noma nge-QuickTime, efakwe ngokwendabuko kuma-macOS.
Dala amakhophi aphelele e-DVD ngokwakha izithombe ze-ISO
Uma lokho esikufunayo kungukukwenza Ikhophi eligcwele le-DVD ngefomethi ye-ISOSingakwenza futhi nalolu hlelo lokusebenza ngendlela elula kakhulu. Lesi sithombe sizoqukatha konke okuqukethwe esingakuthola kwi-DVD ebonakalayo, ngakho-ke, ngokuhamba kwesikhathi, singayibuyisela ikhophi kwenye i-DVD ukuze sibe nekhophi ye-DVD ngendlela ephathekayo, kanye nangefomethi yedijithali.
Yenza isipele iDVD, akukaze kube inqubo esheshayo. Kodwa-ke, ngenxa yokusheshiswa kwezingxenyekazi zekhompiyutha ezifakiwe kwi-MacX DVD Ripper, singazuza kakhulu eqenjini lethu ukuze isethi yonke, kufaka phakathi ihluzo, isebenze ukwenza inqubo yokukopisha noma yokuguqula ngesikhathi esifushane kakhulu.
Uma izidingo zethu maqondana nokulungiswa kwevidiyo esiyikhiphe kwi-DVD, awekho phezulu kakhulu, ngemizuzu engu-5 nje (noma ngaphansi kwalokho) singaba nekhophi kwimishini yethu, inqobo nje uma imishini yethu ingeyona inkathi efanayo lapho kwakhonjiswa khona ifilimu yokuqala ...
Iyahambisana nanoma iyiphi i-DVD
Ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza, iMacX DVD Ripper iyahambisana nama-DVD kuzo zonke izifunda, ukukhishwa okusha futhi nangama-DVD aletha ukulimala ngokomzimba (ngokwezinga elithile ngokusobala).
Unalokhu engqondweni, yenza ikhophi eyisipele yelabhulali yethu yonke yevidiyo kuzobe kungukuthunga nokucula, inqobo nje uma sinesikhala esanele sokugcina, ngoba, ngokuya ngesinqumo esikhethiwe, ifayela eliholelwayo lingahlala amanani angcolile we-GB.
Guqula ama-DVD akho abe yifomethi
Uma usagcina idivayisi ekhaya engahambelani namafomethi wokudlala wanamuhla, ngalolu hlelo lokusebenza ungayiguqula ibe yifomethi ehambisanayo. Kanjani? Kumele ukhethe idivayisi lapho ufuna ukudlala khona okuqukethwe, ngoba uhlelo lokusebenza luzonakekela ukukhetha ama-codec adingekayo.
Kusuka ku-DVD kuye ku-MP4, H.265 / HEVC, MOV ...
Njengoba nje singasebenzisa iMacX DVD Ripper ukuguqula ama-DVD abe amafomethi amadala wedivayisi, singayisebenzisa futhi sebenzisa ama-codec akamuvaNjengoba kunjalo nge-H.265, enikeza amazinga okucindezelwa kabili kune-H.264 isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Ifomethi ye-H.265 iyona esetshenziswa yifomethi ye-HEVC, efanayo esetshenziswa ama-iPhones ne-iPads anamuhla qopha amavidiyo athatha ingxenye yesikhala kunokusebenzisa ifomethi ye-H.264 / MP4.
Hlela amafayela aguquliwe
Lona ngumsebenzi okungenzeka ukuthi ngeke siwusebenzise, ​​kepha-ke, kuyathakazelisa ukwazi ukuthi usinikeza uchungechunge lwamathuluzi alula usike noma ujoyine amavidiyo, engeza imibhalo engezansi futhi ulungise amapharamitha ukwenza ngcono isithombe sokugcina .. imisebenzi esingayisebenzisa lapho siguqula amavidiyo amadala okuthi lapho edluliselwe ku-DVD, angazange aphathwe phambilini.
Ungayigcina kanjani i-DVD nge-MacX DVD Ripper
Ukusebenza kwalolu hlelo lokusebenza kungaphezu kokulula, ngakho-ke awudingi ukuba nanoma yiluphi uhlobo lolwaziama-computer esayensi ukuthi akwazi ukuguqula ama-DVD wethu abe yinoma iyiphi ifomethi. Eqinisweni, kufanele senze izinyathelo ezimbili kuphela:
Faka iDVD emishinini yethu bese uvula uhlelo lokusebenza lwe-MacX DVD Ripper.
Okulandelayo, uhlelo lokusebenza luzobona okuqukethwe kwe-DVD futhi luzosinikeza uhlu ngawo wonke amadivayisi lapho sifuna ukukhiqiza khona okuqukethwe. Sikhetha okufaneleke kakhulu bese silinda ukuthi inqubo iqede.
Thola ikhophi yamahhala yeMacX DVD Ripper
Njengengxenye yalesi sikhangiso (finyelela kusuka lapha), abafana abakuMacX DVD Ripper yibo unikezela ngamalayisense amahhala angama-500, amalayisense asivumela ukuthi sisebenzise uhlelo lokusebenza ngaphandle komkhawulo ngokwemisebenzi. Okuwukuphela kodwa ukuthi inguqulo ngeke isathola izibuyekezo.
Uma sifuna ukujabulela konke izici ezintsha ezifakwa njalo kulolu hlelo lokusebenza, kufanele sithenge ilayisense yokuphila konke, ilayisense yokuthi lezi zinsuku zibiza u- $ 29,95, okuyisaphulelo esingu-56% ngentengo yaso ejwayelekile, okungama- $ 67,95.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » Sebenzisa iMacX DVD Superhero Day bese uzuza imiklomelo emnandi
Iziqeshana zibuyekezwa ngokungeza okungezelelwe okungokoqobo kwezizinda
Ungazivimba kanjani izinhlelo zokusebenza ekukulandeleni nge-iOS 14.5